warkii.com » Juhi Chawla oo baraha bulshada lagu weeraray mar ay ka hadleysa xaalada reer Bachchan ee Corona ku habsaday!!
Juhi Chawla oo baraha bulshada lagu weeraray mar ay ka hadleysa xaalada reer Bachchan ee Corona ku habsaday!!
Atiriishada caanka ah Juhi Chawla ayaa maalmo kahor baraha bulshada soo dhigtay qoraal ay ugu duceyneysa qoyksa Bachchan oo iyagu xaalad adag bartanka kaga jiraan maadama laga helay caabuqa COVID-19 sido kalena xaalad isbitaal ayuu arinkooda gaaray oo Amitabh, Abhishek, Aishwarya iyo Aaradhya ayaa hader isbitaal lagu karantiilay.
Juhi qoraalkii muranka dhaliyay ee in badan lagu Troll-gareeyay wey masaxday maadama ereyga Ayurvedha si fiican loo fahmi waxay ay micno ahaan kala jeeday dad badan ayaana u fahmeen ereygaas inee ka wado ama ku qaladay magacyada Aishwarya iyo Aaradhya midkood.
Sikastee ahaataba Juhi ayaa sifiican u sharaxday arinkaan qoraal kale ay soo saartay waxay ku tiri sida tan,”waxaan soo kabasho deg deg ah u rajeynayaa mudane Amit, Abhishek, Aishwarya iyo Aaradhya sido kale qoraalkeyga hore qalad kama dhicin dhankeyga ee idinka ayaa khalad u fahmeen ereyga Ayurvedha waxaan kawada min-daawad dhireed si ay u isticmaalan weyna ku caafi maadi doonaan deg deg.”
Ayurvedha waa mid kamid ah min daawaadka ama daawo dhireed reer hindu si weyn u isticmaalaan dad badan ayaa Juhi sharaxaad kasii dalbadeen qaabka Corona la isaga daweyn karo dhirtaas..